Zimbabwe: Unsafe Water Raises COVID-19 Risks - allAfrica.com
Residents queue for water (file photo).
Zimbabwe government measures to combat COVID-19 should include urgently providing continuous and affordable access to sufficient safe water to people across the country, Human Rights Watch said today. Long before the coronavirus pandemic, much of Zimbabwe suffered a severe water and sanitation crisis. On March 30, 2020, Zimbabwe, like many countries, ordered a nationwide lockdown to slow the spread of the virus.
Top Headlines Zimbabwe Coronavirus Human Rights